September 5, 2017 - मूल्याङ्कन अनलाइन
मूल्याङ्कन सम्वाददाता | September 5, 2017
फेरि थुप्रिने भयो काठमाडौँको फोहोर
भदौ २०, नुवाकोट । काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर फालिँदै आएको ओखरपौवाका बासिन्दाले अनिश्चित समयका लागि बन्दको घोषणा गरेका छन् । प्रभावित क्षेत्रमा आवासलाई दिँदै आएको मुआब्जाको दूरी र सीमा घटाएको विरोधमा बासिन्दाले फोहोर फाल्न अवरोध गरेका छन् । स्थानीयवासीको अवरोधले सोमबार साँझ र आज बिहान आएका ८५ गाडीलाई फोहोर विसर्जन गर्न दिएर अनिश्चित समयका लागि बन्द गरेको भन्दै सडक ठप्प बनाएको ककनी गाउँपालिका–२ ओखरपौवाका वडाध्यक्ष केदार पौडेलले बताए । “फोहोरको विसर्जनबाट ९०० मिटर दूरीमा पर्ने आवास र गोठका अति प्रभावितलाई प्रतिस्क्वायर मिटर वार्षिक रु. ५० दिँदै आएकामा नयाँ आर्थिक वर्षदेखि घटाएकाले विरोधमा अवरोध गर्नुपरेको हो”, पौडेलले भने, “फोहोरको वैज्ञानिक व्यवस्थापनपूरा पढ्नुहोस्
सन्तोष पुर्कुटी | September 5, 2017
भदौ २०, ताप्लेजुङ । ओलाङ्चुङगोला छिमेकी मुलुक चीनसँग सडक सञ्जालले जोडिए पनि बासिन्दाले यातायातका साधन चढ्न पाएका छैनन् । दुर्गम ओलाङ्चुङगोला बस्तीसम्म सडक आए पनि स्थानीयवासीलाई ओहोरदोहोर गर्ने सवारीसाधन छैन । चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतबाट ओलाङ्चुङगोला बस्तीमा भने ठूल्ठूला सवारीसाधन आए पनि त्यहाँका स्थानीयवासीलाई ओहोरदोहोर गर्नका लागि सवारीसाधन नै छैनन् । यसअघि दिनभर लगाएर टिप्ताला ओहोरदोहोर गर्ने ओलाङ्चुङगोलावासीलाई घर छेउमा नै सडक आए पनि अझै हिँड्नुपर्ने बाध्यता कायमै छ । चीन र नेपालको सिमाना टिप्ताला भञ्ज्याङ बस्तीबाट २२ किमीको दूरीमा छ । बस्तीबाट टिप्ताला पुग्न १ दिन पूरै हिँड्नुपर्छ । तिब्बतमा पर्ने रिउ बजारको भरमा रहेका स्थानीयवासीलाई सडक हुँदाहुँदैपूरा पढ्नुहोस्
प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष चुनावको व्यवस्था हुनुपर्छ – डा. लोहनी
भदौ २०, काठमाडौँ । एकीकृत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राष्ट्रवादी)का अध्यक्ष डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले मुलुकमा विद्यमान राजनीतिक अस्थिरता र अन्योलको अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष चुनाव गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने बताएका छन् । पार्टीद्वारा यहाँ आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा डा. लोहनीले अहिलेको समानुपातिक व्यवस्थाबाट स्थायी सरकारको सम्भावना कम रहेको बताउँदै प्रतिनिधिसभाको चुनाव प्रत्यक्ष मतदाताका आधारमा हुनुपर्ने बताए । माथिल्लो सदनमा मुलुकका सबै जाति र समुदायको प्रतिनिधित्व जनसङ्ख्याको अनुपातमा सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले भने, “राज्यको विभिन्न तहमा भागबण्डाका आधारमा पद बाँड्ने प्रवृत्तिको विकास भएको छ । यसले भ्रष्टाचार मौलाएको छ । प्रतिस्पर्धाका आधारमा सक्षम व्यक्तिलाई उचित स्थान दिनुपर्छ ।” भ्रष्टाचारको अन्त्य, विधिकोपूरा पढ्नुहोस्
चीन भारत स्वस्थ र स्थिर सम्बन्ध आवश्यक : चिनियाँ राष्ट्रपति चिनफिङ्
भदौ २०, सियामेन (चीन) । चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिनफिङ्ले चीन र भारत सम्बन्ध स्थिर र स्वस्थ हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । चीन र भारतका नागरिकको चाहना पनि यस्तै रहेको भन्दै राष्ट्रपति चिनफिङ्ले यी २ देशबीचको सम्बन्ध विश्वासमा आधारित र स्थिर हुनुपर्नेमा जोड दिएको समाचारमा जनाइएको छ । चीनको दक्षिणपूर्वी सहर सियामेनमा सम्पन्न ब्रिक्सको नवौँ सम्मेलनपछि चिनियाँ राष्ट्रपति चिनफिङ् र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच भेटवार्ता भएको थियो । उक्त द्धिपक्षीय भेटवार्ताका क्रममा चिनियाँ राष्ट्रपति चिनफिङ्ले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग सो धारणा राख्नुभएको सियामेनबाट प्राप्त समाचारमा जनाइएको छ । चीनले भारतसँग शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका साथै अरु विभिन्न ५ सिद्धान्तका आधारमा सम्बन्ध बिकास गर्ने तथापूरा पढ्नुहोस्
राजस्व सन्तोषजनक नभएपछि कडाइ गर्न कर्मचारीलाई आग्रह
भदौ २०, काठमाडौँ । आन्तरिक राजस्व कार्यालयले साउन र भदौमा सरकारी राजस्व सन्तोषजनक रुपमा जम्मा नभएको बताएको छ । गत आर्थिक वर्षमा लक्ष्यभन्दा १११ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको थियो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा राजस्वको अंश २३.०४ प्रतिशत छ । गत वर्ष रु. २ खर्ब ५८ अर्ब राजस्व जम्मा भएको थियो । साउन २७, २८ र २९ गतेको अविरल वर्षा र वैशाख २१ र जेठ १४ गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनका कारण सन्तोषजनक राजस्व संकलन हुन नसकेको हो । प्रदेश नं २ अन्तर्गत तराईका ८ जिल्लामा हुन गइरहेको तेस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचन र मंसिर १० र २१ गते तय भएकोपूरा पढ्नुहोस्
भदौ २०, जाजरकोट । आफ्नो मान्छेलाई शिक्षक बनाउनुपर्ने अडानका कारण यहाँका २ विद्यालयमा शिक्षक नियुक्ति हुन सकेको छैन । छेडागाड नगरपालिका–१२ मनघाटस्थित चन्द्रज्योति आधारभूत विद्यालय र त्रिवेणी नलगाड नगरपालिका–६ पिउलीस्थित जनप्रिय प्राविको प्राथमिक तहको राहत शिक्षक पदका लिइएको परीक्षाको अन्तर्वार्ताका बेला व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष भागेपछि १ महिना बढी समयसम्म पनि शिक्षक नियुक्त हुन नसकेको पीडितको गुनासो छ । शिक्षक पद रिक्त भएको ७ महिना बढी भइसकेको छ । परीक्षा लिइएको डेढ महिना हुँदा पनि दलका नेताको हस्तक्षेपले नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएको सरोकारवालाको गुनासो छ । आफ्ना मान्छे परीक्षामा उत्तीर्ण नहुने भएपछि दुवै विद्यालयका अध्यक्ष भागेको बताइएको छ । मनघाटको चन्द्रज्योति आधारभूतपूरा पढ्नुहोस्
काँग्रेसका सांसद अर्यालले २० घर बनाइदिने
भदौ २०, पथरी (मोरङ) । नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद अमृत अर्यालले वडा नं. १९ का बाढीपीडतका लागि घर बनाइदिने भएका छन् । उनले क्षेत्र नं ६ को वडा नं १९ का विपन्न २० बाढीपीडितको घर बनाइदिने घोषणा गरेका हुन् । काँग्रेस १९ नं वडा समितिले आज आयोजना गरेको राहत वितण कार्यक्रममा जनता आवास कार्यक्रमका पूर्वअध्यक्ष अर्यालले सो कार्यक्रमअन्तर्गत घर बनाउन सहयोग गर्ने घोषणा गरेका हुन् । अर्यालकै पहलमा मोरङमा ७५७ घर निर्माण सकिएको छ भने मोरङ क्षेत्र नं ५ को रङ्गेली नगरपालिकामा अवस्थित आँपगाछीको मुसहर बस्तीमा करिब ! सय घर निर्माण भइरहेको छ । जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गतपूरा पढ्नुहोस्
माथिल्लो कर्णालीको लागि लगानी जुटेन, म्याद थपका लागि आवेदन
रमेश लम्साल भदौ २०, काठमाडौँ । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको प्रवर्द्धकले हालसम्म लगानी जुटाउन नसकेको भन्दै लगानी बोर्डमा म्याद थपका लागि आवेदन दिएको छ । भारतीय लगानीकर्ता ग्रान्धी माल्लिाकार्जुन राव (जिएमआर)ले केही दिन पहिले म्याद थपका लागि आवेदन दिएको हो । परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए) भएको ३ वर्ष बित्न लाग्दासमेत परियोजनाको प्रवर्द्धक जिएमआरले वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । आयोजनाको म्याद सकिन अब २५ दिन मात्रै बाँकी छ । बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले म्याद थपका लागि प्रवर्द्धकको तर्फबाट आवेदन परेको र त्यसमाथि छलफल भइरहेको जानकारी दिए । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा सरकारले सो आयोजनाको म्याद १ वर्ष थपपूरा पढ्नुहोस्